UMotsepe usukela inyoka isemgodini ngokufuna ukwengamela iCAF - Impempe
UMotsepe usukela inyoka isemgodini ngokufuna ukwengamela iCAF
Umhleli weMpempe, uSihle Ndlovu uxwayisa uMotsepe ngolweCAF
Ngiwumuntu ongesabi nakancane ukuthi akayazi into, futhi akungehlisi nakancane ukubuza uma kukhona lapho ngingaqondi khona kahle.
Ngazi kahle ukuthi abanye bakubona njengokuzehlisa ukuthi abazi, kangangoba umuntu uncamela ukuphawula entweni angenayo ulwazi oluphelele ngayo.
Useyopatanisake ezama ukuphawula kukhulunywa ngodaba angazi nhlobo ukuthi lusuka kuphi luphele kuphi.
Uyabona nje mina ngiyazazi izinto engizaziyo futhi engingafuniseli ngazo. Uma kukhulunywa ngezemidlalo ngingasho ngingangabazi ukuthi ulwazi lwami lungcono kakhulu lapho futhi ngingakhuluma kuze kushone ilanga.
Nokho ngazi kahle ukuthi ulwazi lwami aluluhle kahle uma kukhulunywa ngepolitiki. Angifuni nokuqala ngiphawule ngezinto ezithinta ipolitiki ngoba ngingaze ngikhulume into ezongibukanisa nabantu. Mhlawumbe kwenziwa nawukuthi angiyithandi kwayona ipolitiki leyo, ngakho angifuni nje nokuphawula ngayo.
Kuleli sonto ngizwe kuthi angihleke kodwa ngabuye ngafikelwa umunyu kancane ngesikhathi ngibona isitatimende seFifa. Phela inhlangano ephethe ibhola emhlabeni ibithumele lesi sitatimende ngoba ifuna ukucacisa ukuthi iyamkhulula uPatrice Motsepe, ongumengameli weMamelodi Sundowns, ukuthi angenele ukhetho lokuba ngumengameli weConfederation of African Football (CAF).
Hhayi cha impela izinto zimane ukwenzeka. Okungifikele kuqala emqondweni ukuthi kanti lento yokuba nemali eningi iyabadidisa yini abantu emiqondweni. Uyazi uMotsepe ngiyamhlonipha kakhulu futhi nje ngiyishayela ihlombe indlela angenawo ngayo umona uma kukhulunywa ngomnotho wakhe.
Cha yena bandla uyaselula isandla futhi nje kumele ake athole nomklomelo ngalokho. Kufanele agcine lapho kodwa akhohlwe yindaba yokufana ukuba umengameli weCAF.
Uyazi muhle kakhulu uMotsepe engumengameli weSundowns, aphinde aholele kakhulu abadlali bayo. Lokho kodwa akusho ukuthi useyalazi ibhola nepolitiki yakhona.
Mhlawumbe kumele ake ayophuza itiye no-Irvin Khoza benoDanny Jordaan khona bezomtshela ukuthi akusinekwa ebholeni futhi akufani nhlobo nasezimayini lapho umcebo wakhe omningi uqhamuka khona.
Eish, sengikhohliwe ukuthi konje uKhoza noJordaan yinkukhu nempaka! Hhayi kodwa phela usengabavakashela ngamunye ukuze athole kahle ukuthi yini le afuna ukuzifaka kuyona.
UMotsepe kumele azi ukuthi ukuba nezimoto eziyishumi ngoba nakhu unemali eningi, akusho ukuthi usungakwazi ukwakha imoto. Kusuke kungenzeka nokuthi unezimoto eziningi nje kodwa awukwazi nokushintsha irabha le yama-wiper. Phela akukona ukusineka ukwakha imoto, akufani nhlobo nokuyithenga bese uyayishayela.
Esami iseluleko kuMotsepe ukuthi ake anake amabhizinisi akhe neSundowns, akhohlwe ukuzibangela ukuphathwa yikhanda okungenasidingo ngokuzifaka ekukhulumeni kwebhola lase-Afrika.
Yini ngempela le encinza uMotsepe lapho kukhala khona isicathulo sakhe ezinkampanini eziyinqwaba kangaka?
Uyabona mfo kaMotsepe ubukeka uyindoda ewumqemane futhi lokho kufanele ngoba phela udla izambane likapondo. Asikhoke isidingo sokuthi ufune ukuzigulisa ngokufuna ukuba umengameli weCAF. Zihlalele kwakho mfan’omdala ukhohlwe ukujaha isikhundla esingeke sikusize ngalutho.
UJordaan lo engithi kusamele uphuze naye itiye angakutshela kahle ukuthi kushisa kanjani ukuzama ukuthola izikhundla kwiCAF. Wake wazama kodwa wahluleka ngamalengiso.
Uma wena uzodaza inkani uqhubeke bese mhlawumbe ngenhlanhla uwine, uzokumela ukutshelwa ukuthi ungakwenzi lokhu kodwa yenza lokhu.
Indoda ehlakaniphile yileyo eyaziyo into ekwazi ukuyenza naleyo engakwazi nhlobo ukuyenza. Njengoba ngishilo mina ngizazela ezemidlalo ngakho ngeke ungizwe nje ngithi ivaccine kwasha kwacima kwavutha amalangabi.
UMotsepe akahlale kwakhe alokhu elunguza eChloorkop ukuthi kuhamba kanjani kwiSundowns, aphinde athi qala emabhizinsini akhe. Akakhohlwe indaba yokufuna ukuba umengameli weCAF, izomgulisa lento. Shwiii!!
Previous Previous post: Ulume waphephetha uMgqithi egxeka abagadli beDowns ngokushweba amathuba
Next Next post: UNurkovic uyisiza kakhulu iChiefs, kusho umqeqeshi wePirates, uZinnbauer